बजारमा सिटामोल अभावको कारण के? – Health Post Nepal
२०७८ माघ ६ गते १६:०८
काठमाडौं – नेपालमा कोरोना संक्रमण दिनानुदिन बढेको बढ्यै छ। यस्तो अवस्थामा अत्यावश्यक औषधिहरुको अभाव बजारमा देखिन थालेको छ। पछिल्लो समय सर्वसुलभरुपमा पाइने सिटामोलकै अभाव बजारमा देखिएको छ। संक्रमितहरुले पनि सिटामोल पाउननक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ।
सिटामोलको अभाव भएको समाचार बाहिरिए पछि सरकार पनि सचेत भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिटामोललगायतका औषधिको अभाव तत्काल अन्त्य गर्न गृह मन्त्री र मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिएका थिए।
उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई बोलाएर औषधि अभावका विषयमा के भएको अध्ययन गरेर तत्काल उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएका थिए।
उनीहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभागलगायत औषधि उत्पादक कम्पनीहरूसँग पनि यसबारे परामर्श गरेका थिए। गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘हामीले नेपाल औषधि लिमिटेड र निजी उत्पादक कम्पनीलाई औषधि उत्पादन बढाउन भनिसकेका छौं।’ औषधिको कृत्रिम अभाव सृजना गरिएका कुराहरु पनि बाहिरिएपछि त्यसो गरिएको भए तत्काल कारबाही गरिने पनि खाँडले बताए।
सिटामोलको अभाव एकपटक होइन बारम्बार देखिने गरेको छ। यसअघि पहिलो तथा दोस्रो लहरको कोरोनाका बेला पनि बजारमा सिटामोलको अभाव भएको थियो। कोरोना बढ्दै जाँदा कालोबजारी गर्नेहरुले अभाव सिर्जना गर्ने गरेको गुनासो सु्न्ने गरिन्छ। अभाव टार्न सरकार उदासिन बन्दा सर्वसाधारणले पटकपटक दुःख पाउने गरेका छन्। सिटामोलको मूल्य बढाउन पनि उद्योगहरूले उत्पादन घटाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ। यसको अनुगमन औषधि व्यवस्था विभागबाट हुन सकेको छैन।
मन्त्रालय भन्छ : सिटामोलको अभाव छैन
यता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने बजारमा सिटामोलको अभाव नभएको बताएको छ। तर, बजारमा तपाईं सिटामोल किन्न जानुभयो भने सहजै पाउने अवस्था छैन।
मन्त्रालयका सहप्रवक्त डा. समिरकुमार अधिकारीले बजारमा सिटामोललगायत अन्य कुनै पनि औषधिको अभाव नभएको दाबी गरे।
स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत पथलैया स्टोरमा १० लाख सिटामोल भण्डारमा रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी सरकारी फार्मेसीमा १ करोड भन्दा बढी मात्रामा सिटामोल रहेको उनले बताए। तर, बजारमा भने सिटामोलको अभाव देखिन्छ।
अधिकारीले अभावको समाचार आएको भन्दै सिटामोललगायत अत्यावश्यक औषधिको विवरण तत्काल अध्यावधिक गर्न सरकारी अस्पताल र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन शाखालाई निर्देशन दिइसकिएको बताए। उनले सरकारी फार्मेसीमा औषधि अभाव हुनसक्ने अवस्था आए तत्काल नेशनल औषधि लिमेटेडसँग सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरे।
यता, मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले आफूले पनि सिटामोलको अभावबारे सुनेको बताउँदै कालोबजारीका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हुनसक्ने बताए। उनले बजारमा पर्याप्तमात्रामा सिटामोल गइरहेको बताए।
‘मूल्य समायोजनको कुराले पनि अभाव भएको हुनसक्छ’
बजारमा सिटामोलको अभाव देखिएका बेला औषधि व्यवस्था विभागले यसमा मूल्य समायोजन आवश्यक रहेको बताएको छ। विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले औषधि उत्पादक कम्पनीहरुले सिटामोलको मूल्य समायोजन गर्न माग गरिरहेका बताउँदै यसका कारण पनि अभाव सिर्जना भएको हुनसक्ने बताए।
उनले सिटामोललगायतका औषधिहरुको मूल्य समायोजन गर्नका लागि आफूहरुले होमवर्क गरिरहेको र कार्यविधि बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाइसकेको जानकारी दिए। ‘हामीले मूल्य समायोजनका लागि कार्यविधि बनाएर मन्त्रालय पठाइसकेका छौं। साथै, तत्काल केही समायोजन गर्न सकिन्छ कि भनेर केही फाइल पनि पठाएका छौं। प्रक्रिया अघि बढेको छ।’, उनले भने।
उनले बजारमा सिटामोल अभाव भएपछि औषधि उत्पादहरुसँग छलफल गरेको बताउँदै उनीहरुले औषधि उत्पादनको लागत बढी भएको तर सस्तोमा बेच्नु परेकोले मूल्य समायोजन गर्न आग्रह गरेको बताए।
‘उहाँहरुले बिक्रीवितरणमा लाग्ने कस्ट थोरै भएकोले उत्पादनमा समस्या भयो भन्नुभएको छ। हाम्रो उत्पादन कस्ट कभर हुन सकेन भन्नुभएको छ। यसबारे हामीले पहल गरिसकेका छौं, केही समयभित्रै औषधिमा मूल्य समायोजन हुन्छ।’, उनले भने।
ढकालले सिटामोल उत्पादनमा कच्चा पदार्थको अभाव नरेहेको बताए फनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन। ‘हामीसँग अझै १७ टन कच्चा पदार्थ बाँकी छ। यसले साढे ३ करोड औषधि बनाउन पुग्छ। केही स्टकमा पनि छ। करिब १ करोड १४ लाख स्टक छ। करिब ६ करोड औषधि बजारमा पठाइसकिएको अवस्था छ। यसरी हेर्दा अभाव हुन नपर्ने हो।’, उनले भने।
‘दिनहुँ कोरोना संक्रमित बढिरहेकाले पनि जनताले बढी स्टोर गरेकाले अभाव भएको हो कि?’, ढकालले भने।
उनले जनता तथा उपभोक्तालाई सीमित मात्रामा मात्र औषधि बिक्री वितरण गर्न पनि आग्रह गरे। साथै औषधि उत्पादक कम्पनीहरुलाई अभाव टार्न बढीभन्दा बढी औषधि उत्पादन गर्दै बजारमा पढाउन आग्रह गरिसकिएको बताए। अहिले नेपालमा २५ कम्पनीले सिटामोल उत्पादन गरिहरका ढकालले बताए।
भोलिदेखि बजारमा नियमित औषधि जान्छ : लिमिटेड
नेपाल औषधि लिमिटेडले भोलिदेखि (शुक्रबार) देखि निरन्तर उत्पादित औषधि बजार जाने बताएको छ। लिमिटेडका महाप्रबन्धक मोहम्मद सफिउल्लाहले अभाव टार्न भोलिदेखि नियमित रुपमा उत्पादित औषधिहरु बजार पठाइने बताए।
‘भोलिदेखि माग आएअनुसार औषधिहरु नियमित रुपमा बजारमा जान्छ। जति उत्पादन हुन्छ सबै पठाउँछौं।’, उनले भने।
उनले लिमिटेडसँग औषधिहरु मौज्दात नभएको बताउँदै सबै उत्पादित औषधिहरु यसअघि नै बजारमा पठाइसकिएको बताए। साथै उनले माग बढे पनि सिटामोलको अभाव नै हुने अवस्था नेपालमा नआउने बताए।
विभाग भन्छ-कच्चा पदार्थ अभाव छैन, लिमिटेड भन्छ-अभाव नै प्रमुख समस्या
विभागका महानिर्देक ढकालले सिटामोल उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थ पर्याप्त रहेको बताइरहे पनि लिमिटेडका महाप्रबन्धक सफिउल्लाहले कच्चा पदार्थको अभावकै कारण वर्तमान समस्या आइपरेको बताएका छन्।
‘कच्चा पदार्थ महँगो भएको छ साथै खरिद ऐन पनि झन्झटिलो छ। कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको बढ्यै छ। अहिले पनि प्रतिकेजी ८ सयभन्दा बढी छ। तर, मूल्य समायोजन हुन सकेको छैन। त्यसैले बजारमा अभाव देखिएको छ।’, उनले भने।
उनले सिटामोलमा लिमिटेडलाई घाटा रहेको भन्दै बीचमा मूल्य बढ्नसक्ने बताए। यसका लागि विभाग र मन्त्रालयसँग छलफल भइसकेको उनले उल्लेख गरे। तर, औषधिको अभाव भने नहुने उनको दाबी छ।